डा. केसीले भने, ‘सरकारसंग बार्ता गर्न जुनसुकै बेला तयार’ (विज्ञप्ती सहित) – Nepali Health
डा. केसीले भने, ‘सरकारसंग बार्ता गर्न जुनसुकै बेला तयार’ (विज्ञप्ती सहित)
२०७५ असार २७ गते ९:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २७ असार । जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीले सरकारसंग जुनसुकै बेला बार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
यसअघि कतिपय सञ्चारमाध्यमले सरकारी अधिकारीहरुलाई हवाला दिदै डा केसीले बार्ता गर्न नचाहेको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेका थिए । डा केसीले सो कुरामा सत्यता नरहेको भन्दै आफू बार्ताका लागि सधै तयार भएको बताएका हुन् । उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन् , ‘हामी कुनै पनि बेला वार्ताका लागि तयार रहेको र सरकार तयार भएको अवस्थामा तत्काल वार्ता टोली पठाउने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं । ‘
उनले विज्ञप्तीमा ‘यतिका दिनसम्म संवेददनहीन र गैर जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा माग पूरा गर्न कुनै पहल नगरेको सरकारका तर्फबाट जिम्मेवार व्यक्तिहरुले हामी वार्तामा आउन नचाहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ भनेर समेत उल्लेख गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै १२ दिन देखि जुम्लामा अनशनरत डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदे गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
यस्तो छ डा. केसीको विज्ञप्ती
लहान : गर्भवती महिलालाई बाख्रा वितरण !